Self Service – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » Self Service – KZ’s ထမင်းဆိုင်	14
Posted by ဇီဇီ on Jan 4, 2016 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 14 comments
ငါးမျိုးစုံနှင့်ကြော်၍ရသောဟင်း ငါးကိုဆားနယ်ကြော်ပီးဆယ်ထားလိုက်တယ် ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူထောင်း အနီ ကိုပါးပါးလှီး ဆီအိုးထဲ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး ထည့် ညိုးလာလျှင် ဂျင်း အဖြူဥထောင်းထည့် အဲ့မှာပါတဲ့အဓိကပဲငါးပိ ၁ ဇွန်းထည့် ရဲကြွပ်လာတဲ့ထိကြော်ပီးငရုပ်ကြမ်းမှုန့်ထည့် မွှေးလာပီဆို ငါးကြော်ထည့်မွှေ ငါးနဲ့အနှစ် လုံးသွားရင်ရပါပြီ
မြူရွက်သုပ်ကတော့ အရွက်ကိုရေပွက်ပွက်ဆူထဲထည့် ခနဆိုရပြီ ရေအေးစိမ် ပြန်ဆယ်ပီ်း ရေကုန်သည်ထိညှစ် ရေကျန်ကစားမကောင်း အရွက်ပြုတ်ကိုအနေတော် လှီးဖြတ် ကြက်သွန်နီ ကြော်ဆီချက် ဆား ဂျွန်ခြောက်မှုန့် နှမ်းလှော်ထောင်းထည့်နယ် အပေါ်မှာကြက်သွန်နီကြော်လေးဖြူးရပြီိ
ခမ်းသီးနှပ်က ခမ်းသီး ၄ စိပ်စိပ် ခေါင်းမပြတ်စေရ အနှစ်လုပ်ဖို့ရာ ကြက်သွန်နီ ဖြူ ဂျင်းနဲနဲ ဂျွန်ခြောက်ရောထောင်း အနှစ်ထဲ ဆားအချိုပါထည့် ခမ်းသီးစိပ်ထဲ အနှစ်တွေ ညှပ်ထည့် ဒယ်အိုးထဲ ဆီများများထည့် ဆီတအားမကျက်ခင့်ငရုပ်သီးမှုန့် နနွင်းမှုန့်ဆီသပ် ခမ်းသီးတွေစီထည့် ရေ ခမ်းသီးနှပ်လောက်ရုံထည့် အဖုံးအုပ်နှပ်ပါလေ
အိုးထဲခရမ်းချဉ်သီး၅၀သားလှီးထည့် ကြက်သွန်ဖြူ ၁ ဥ အနီ ၃ ဥ ထောင်းထည့် ဆားနဲနဲ ငါးပိ ပိုထည့် ငရုပ်သီး အကြမ်းမှုန့် နနွင်းမှုန့် ဆီထည့်ီငါးပိချက်အရင်ချက်လိုက်တယ် ခမ်းချဉ်ကျေ မှ ကြက်သား ၅၀သားထည့် လုံးချက် ကြက်သားနူးသည်ထိ ရေနဲနဲချင်းထည့် ငရုပ်သီးစိမ်းက အစပ်စားနိုင်လျှင်ထောင်းထည့် မစားနိုင်လျှင် အတောင့်ချိုးထည့်ဆီပြန်လျှင် ရပါပြီ
ပုဂျွန် နပိချက်ကတော့ ပုဂျွန် ၂၅ သားဆို ခမ်းချဉ် ၅ လုံးလောက် ကြက်သွန်ဖြူ နီ အနှစ်ထောင်း နနွင်းမှုန့် ငရုပ်သီးမှုန့် ငါးပိ အနေတော် ဆား ဆီ ထည့်ပီး နပိချက်အရင်ချက်လိုက်တာ ခမ်းချဉ်ကျေဆီပြန်လာမှ ပ ဂျွန်ထည့် ငရုပ်သီးစိမ်းထည့် ရေနဲနဲထည့်နှပ် ဆီပြန်ကြိုက်ရင် လိပ်နေအောင်ချက် အနော်က ဆီလည် ရေလည်ကြိုက်
ဂေါ်ရခါးသီးသုပ်က အသီးပါးပါးလှီးရေစိမ်ထားလိုက်တယ် အချဉ်ဖျော်ဖို့ ရှာလကာရည် လိုသလောက် ရေနှင့်ရော ကြက်သွန်ဖြူ ငရုပ်သီး နံနံပင်တောက်တောက်စင်း ထည့် နှမ်းထောင်းဆီချက် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ငရုပ်သီးအကြမ်းမှုန့်ကို ရှောက်ကော ပါကော ဟွာချောက် နဲ့ဆီချက် သကြားနဲနဲ ထညက်နဲ့ကြိုတဲ့ကြာညို့် အာ့တွေထည့်ပီး အချဉ် ဖျော် စားခါနီးမှ ဂေါ်ရခါးသီးဆယ်ထည့် အချဉ်ရေလောင်းထည့်နယ်စား
ရှမ်းဟင်းရည်က ဟင်းရည်အိုးဆူလာရင် ဆား ပဲပုတ်ကြော်ထောင်းထည့် အရိုးပြုတ်ရည်က ပိုကောင်းတယ် ကြက်သွန်ဖြူရိုက်ထည့် အရွက်တွေက ဂေါ်ရခါးညွန့် အာလူး ပဲသီး ကန်စွန်းရွက် ပဲပြား တိုရ ဆူးပုတ် ကြိုက်ရာ အရွက်စုံထည့်၍ ရပါသည် ပင်စိမ်းကြိုက်လျှင်ထညိ့ပါ
ဝက်သားနှပ် ကြက်သွန်ဖြူ နီ ဂျင်း ဆား ငရုပ်သီးမှုန့် ကြာညို့ ဆီအားလုံးရောနယ်ပြီး နှပ်လိုက်တာ
ငါးမြင်းပေါက် ဆားအနေတော်ထည့်နယ်တစ်ညသိပ် ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ နီထောင်း ဆီသပ် ငရုပ်သီးမှုန့် နနွင်းမှုန့် ထည့် ငပိနဲနဲထည့် အနှစ်ရပြီဆို မကျည်းရေထည့်ပီး ဆီပြန်လာသည်ထိမွှေပီးသကာလ ငါးမြင်းပေါက်တွေ လွှတ်ချလိုက်ပါသည် တအားမွှေ၍မရပါ ငါးနဲ့အနှစ်လုံးသွားရင် ရေနဲနဲ ထည့်နှပ် ငရုပ်သီးစိမ်း နံနံပင်အုပ် စားလို့ရပါပြီ
စတူးက ခြေထောက်ဆို ဒီတိုင်းတုံးပြီး ဆား ကြာညို့ ရှောက်ကောလုံး နယ်နှပ်ထား နာရီဝက်လောက်ဆို ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်းထည့်ပီးတရှူးရှူးမြည် တဲ့အိုးကြီးထဲထည့်ပေါင်းပလိုက်တယ် ပေါင်စတူးဆိုရင်တော့ ဆား ရှောက်ကောမှုန့်သကြားနဲနဲ နဲ့နယ်ပီးကြော်လိုက်တယ် ကြော်ပီးရင် အိုးထဲ ကြံချောင်းလေးခင်းပီး ဝိပေါင်ကြော်တင် ရေနွေးထည့် ဆား ရှောက်ကောလုံးလေးထည့် ကြက်သွန်ဖြူ များများ ဂျင်းထည့် ပြုတ်လိုက်တယ်
ငါးကချင်က ငါးကိုဆားနယ် တစ်ညသိပ် ကြက်သွန်ဖြူနီ ဂျင်းဆီသပ် ငါးပိနဲနဲ နနွင်း အရောင်တင်မှုန့် ထည့်ပြီး အနှစ် ချက်ဆီပြန်ရင်ငါးထည့် ငါးကျက်ခါနီး ကင်မွန်းချဉ်တောက်တောက်စင်းပြီးထည့် နံနံပင် ဖက်ဖယ် ပင်စိမ်း ရှမ်းနံနံ ငရုပ်သီးစိမ်း ရောသမမွှေ ထည့် စိုစိုလေးစားချင်ရင် အရည်လေးချန် ခြောက်ခြောက်လေးစားချင်ရင် ရေခမ်းထိချက် အမြန်ဆုံးဟင်းခနဆိုကျက်ပီ
ရွှေချဉ်ပေါင် အရွက်နုခြွေထည့် ကြက်သွန်ဖြူ နီ ထောင်းထည့် ငရုပ်သီးမှုန့် နနွင်းမှုန့် ဆီ ဆား ငါးပိ အချိုမှုန့်စားရင် ထည့်လို့ရပါသည် အနော်က အရိုးပြုတ်ရည် or ငါး ထည့်ပါသည် အားလုံးရောပီးလုံးချက် ချဉ်ပေါင်ကျေသော် ရုံးပတီသီးထည့် အရွက်စိမ်းနံ့ပျောက် ၍ မွှေးလာလျှင် ရေထည့် ပွက်ပွက်ဆူ ဟင်းရည်ကျလာမှ အရသာမြည်းလိုတာထည့် နံနံ or ပင်စိမ်း ငရုပ်သီးစိမ်း ချိုးထည့် စားလို့ရပါပြီ
ဒီတစ်ပတ်တော့ မသင်ဇာမြင့် က ကူချက်လို့ ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်။
အမက မန်းလေးမှာလည်း စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပါ။
ကွကိုယ် ဟင်းစပ်လေးတွေ တွဲ ပြီး မှာစားပါခညာ။
ဒီထဲက ဟင်းတွေကို ဟင်းစပ်လှည့်လည်ပြီး ၇ ရက်စာစပ်ပေးနိုင်ရင် Best comment ပေးမယ်။
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: ပြတော့ များဂျီး
ပြီးဒေါ့ တခုမှလဲ စားရဘူး
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ့ မလဲ
မစားရ ဝခမန်း ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး တင်နေရတာ။
kai says: ဒီလ ဒါကို သတင်းစာထဲထည့်ရင်ကောင်းမလားမသိ…။
တိုတိုနဲ့လိုရင်း… ရွှေချဉ်ပေါင်ဟင်း.. ကြိုက်၏.. ကြိုက်၏..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နက်ဖန်မှ အရေးးအသား နဲ့ စာလုံးပေါင်း ပြန်စဉ်ပေးးလိုက်မယ်…
alinsett says: အမငီး…. ပုံတွေ ကြည့်ပြီး.. သွားရည်တမြားမြား ကျ…
ကွန်ပြူတာစခွင်ကို လျှာနဲ့ လျက်မိတော့မယ် တကဲကဲ….
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆန်းဒေး-မန်းဒေးတုန်းက…အဖေ အမေ ညီ ညီမတွေ ရှိရာ နယ်မြို့ကလေးကို လည်လည်သွားတာ…
ကျနော့်မေမေက… ကျနော် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် စားဖို့ဆိုပြီး.. ငါးရံအကောင်သေးလေးတွေကို နေလှန်းပြီး
အာပြဲခြောက်… ငါးနီတူ(သဲခြောက်)စတဲ့ ငါးခြောက်ငါးခြမ်းလေးတွေကိုလည်း ကြွပ်ကြွပ်လေး ထိုင်ကြော်ပေး…
ကျနော် ကြိုက်တဲ့ အမဲသားဟင်းတို့..ငါးချဉ်သုပ်တို့… ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျောတို့လည်း စီစဉ်ချက်ပြုတ်ပေးသေး…
ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်နေတဲ့ အမေဘေးမှာ ထိုင်ပြီး..တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ထိုင်စား…စကားတွေပြော… .ပြန်မယ့်နေ့ကျတော့… မိသားစုနဲ့… အမေ့လက်ရာ ထမင်းဟင်းတွေကို လွမ်းနေရတော့မှာပဲ ဆိုပြီး..
.အမေ…ထိုင် ကြော်လှော်ပေးထားတဲ့ အကြော်အလှော်ပုလင်းတွေ မေ့ကျန်ခဲ့တယ်…
.ပြန်လည်း လှည့်ယူမနေတော့ပါဘူး… ပို့လည်း ပို့ခိုင်းမနေတော့ဘူး.. အမေတို့ပဲ စားလိုက်တော့…လို့… ငင့်…. ငတ်ပါပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
နာ ဆို အစားအသောက်ကို အရင် သတိရမှာ။
Mike says: .ခုချက်ပြတဲ့ဟင်းတွေတော့အကုန်ကြိုက်..အရသာရှိမဲ့ဟင်းချည့်ပဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော်က ဝက်စတူး စားချင်နေတာ
Mike says: ဖွဘုတ်မှာတွေ့လို့မလာတာ…ခိခိ..ပုံတော့တင်မရလို့
January4at 10:51am ·
Credit: ‪#‎ဟင်းချက်နည်းများ‬ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: အပေါ်ကွန်မန့်ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလို့ထပ်မန့်တာ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471465116375506&set=a.137090559812965.1073741832.100005360642012&type=3&theater
Mike says: ပေးထားတဲ့လင့်မှာသာသွားကျိပါတော့
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆိတ်သားဟာအညှီနံ့ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက်မြန်မာမှုပြုလို့မရပါဘူး
ကလေးလက်သီးဆုပ်အရွယ်(အရိုးပါ)အတုံးများတုံးကာအမျှင်ခြစ်ထားတဲ့ သင်္ဘောသီးစိမ်းအရည်များညှစ်ချပြီးမိနစ်(၄၀-၄၅)ခန့်နှပ်ထားပါ။(သင်္ဘော သီးမရခဲ့ရင်ကီဝီသီးကဲ့သို့အသားကိုနှုးအိစေနိူင် သောfood tenderlizerအသီးများကိုသုံးနိူင်ပါသည်။)
Credit: #ဟင်းချက်နည်းများ ®DG
Mike says: .ကေဇီလုပ်မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်…
အောင် မိုးသူ says: ပုစွန်ငါးပိချက်ကတော့ ကြိုက်တယ်